(Dhagayso Warbixin) Xildhibaan Gaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay Boossaaso. – Radio Daljir
(Dhagayso Warbixin) Xildhibaan Gaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay Boossaaso.
Oktoobar 29, 2012 6:19 b 0
Boossaaso, Oct, 29 – ?Raysul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso, waxaana si diiran usoo dhaweeyay maamulka gobolka iyo qaybaha bulshada magaalada.
Mas?uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bari, odayaal iyo dadweyne fara badan ayaa xildhibaan Cabdiweli Maxamed Cali si diirran ugu soo dhoweeyay meel 40 km u jirta magaalada Boosaaso.
Guddoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan iyo duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan ?ayaa ka mid ahaa mas?uuliyiinta maamulka Puntland ee soo dhoweeyay wafdiga raysul wasarihii hore ee Soomaaliya.
Mudane Cabdiweli Maxamed Cali ?Gaas? oo hadal kooban siiyay dadkii ku soo dhoweeyay duleedka Boosaaso ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay booqashada magaalada Boosaaso, waxaana uu hadalkiisa raaciyay booqashadiisu inay tahay u kuurgalida xaaladaha daqan-dhaqaale oo Puntland, oo uu tilmaamay markii uu Ra?iisul-wasaaraha ahaa inuusan waqti u haynin.
Wararka qaar ayaa tilmaamay in mudane Gaas uu ?kormeer ku tegay kulliyadda tababarka booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo, wuxuuna halkaas kula hadlay boqollaal ka tirsan ciidanka booliska Puntland oo tababar uu u socday.
Cabdiweli Maxmaed Cali oo la dejiyay xarunta martida ee magaalada Boosaaso ayaa lagu wadaa inuu maanta kulamo la qaato madaxda gobolka, odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada.
Raysul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa horey u booqday magaalooyin ay ka mid yihiin Gaalkacyo, Bayra, Bursaalax, Riigaamane, Goldogob, Burtinle, Garowe, iyo Qardho. Waxaana waraysi uu siiyay Radio Daljir uu guud-ahaabna ku beeniyay warar la isla-dhexmarayay oo sheegayya inuu yahay murashax u tartamaya xilka madaxwaynaha Puntland.
Marxuun wariye Tuur oo maantay lagu aasay duleedka magaalada Moqdisho.